यी हुन् बालुवाटार बैठकका तीन एजेण्डा, देउवा, प्रचण्ड र ओलीबाहेक अरु को छन् सहभागी ? — Sanchar Kendra
यी हुन् बालुवाटार बैठकका तीन एजेण्डा, देउवा, प्रचण्ड र ओलीबाहेक अरु को छन् सहभागी ?
काठमाडौँ । बालुवाटारमा तीन दलका नेताहरुको छलफल जारी छ । केहीबेर अघि सुरु भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, काँग्रेस नेता समेत रहेका सुचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेकपा एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेल तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी छन् ।
नेताहरुबीच एमसीसी, स्थानीय निर्वाचन र संसद अवरोध खुलाउने तीन एजेण्डा रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव गंगा दाहालले जनाएकी छन् ।
एमसीसीबारे तीन दलका नेताहरुको बुझाई फरक फरक छ भने स्थानीय निर्वाचनका सम्वन्धमा तीनै दल लगभग एक ठाउमा रहेपनि प्रमुख प्रतिपक्षबाट भइरहेको संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा पनि दलहरु एकमत छैनन् ।
एमसीसी विवाद- कस्तो अवस्थामा सभामुखलाई महाभियोग लाग्छ ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले पत्र लेख्दै संसदबाट फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्न दबाव दिएको छ । गत असोजमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसी पास गराउनका लागि समय माग्दै लेखेको पत्रको जवाफ फर्काउँदै एमसीसीले फागुन १६ गतेभित्र पास गर्न भनेको हो ।
अब एमसीसी पारित गर्नका लागि संसदमा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संसदमा टेबल गर्ने निर्णायक ठाउँमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा छन् । सापकोटाले दलहरुबीच आम सहमति नजुटेसम्म एमसीसी टेबल गर्ने अडान राख्दै आएका छन् । गत असोजमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा चार–पाँच महिनाभित्र नेपालमा राजनीतिक सहमति जुटाएर संसदबाट पास गर्ने भनिए पनि एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दलहरु अहिलेसम्म विभाजित अवस्थामै छन् ।
एमसीसी परियोजना पास गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेर लागेका दल संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस हो । अन्य दलहरु माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरु एमसीसी परियोजनाका केही प्रावधान हटाएर पास गर्नुपर्ने वा पास गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा एमसीसी पास गर्न चाहन्थे । उनले सभामुख आफू अनुकुल नभएपछि सभामुखको आलोचना गर्दै आएका थिए । गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबिच बालकोटमा भेट भएको थियो । सो भेटमा एमसीसी पास गर्न सभामुख अवरोधका रुपमा पस्तुत भए महाभियोग लगाएर हटाउन एमालेले सहयोग गर्ने ओलीले देउवालाई बताएको चर्चा चलेको थियो । बालकोटमा भेटेको ठीक १ महिनापछि आइतबार अपराह्न बालुवाटारमा ओलीले देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
एमसीसी संसदमा लैजान सरकार अग्रसर भइरहेका बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरुबिच पूर्ण सहमति नजुटी संसदमा टेबल गराउने पक्षमा छैनन् । यता एमसीसी परियोजनाले सम्झौतामा रहेको व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
एमसीसी अघि बढाउन सरकारमाथि अमेरिकी कूटनीतिक पक्षबाट निरन्तर दवाव रहेको छ । सो दवाव अहिले सभामुख अग्नि सापकोटा माथि पनि परेको छ । सरकारको अनुकूल सभामुख नभएपछि सभामुखमाथि महाभियोग लगाउने अर्को सभामुख निर्वाचित गरी सो परियोजना पास गर्ने चर्चासमेत चल्ने गरेको छ ।
सभामुख पदमुक्त हुने अवस्था
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख तथा उपसभामुखको पद रिक्तसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा (क) मा ‘निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।
​त्यस्तै, (ख) मा निजले लिखित राजीनामा दिएमा र (ग) मा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।
संविधानको उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखले गर्ने भनिएको छ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ’ भन्नेसमेत व्यवस्था संविधानमा छ ।
यस्तो छ संसदको गणित
प्रतिनिधि सभामा कूल २ सय ७५ सांसद मध्ये हाल २७१ सांसद छन् । जस अन्र्तगत नेकपा एमालेका ९८ सांसद छन् । कांग्रेसका ६३ सांसदमध्ये २ जना निलम्बित रहेकाले ६१ जना छन् । माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ४९ जना छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३ जना छन् भने जनता समाजवादी (जसपा) का १९ जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का १३ जना सांसद छन् ।
त्यस्तै राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका तर्फबाट एक÷एक सांसद गरी ३ सांसद छन् भने ३ स्वतन्त्र सांसद छन् । पूर्वमाओवादीका ४ सांसद कारवाहीमा परेपछि हाल प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद रहेका छन् । जसमा कांग्रेसका २ सांसद निलम्बित छन् भने जसपाका सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन् । यस्तै रेशम चौधरी जेलमा छन् ।
यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभामा मतदान गर्न पाउने २ सय ६७ सांसद छन् । यो संख्यामा २ तिहाइका लागि १ सय ७८ सांसद पुग्नुपर्ने हुन्छ । यो आँकडा हेर्दा कांग्रेस, एमाले र लोसपा मिल्दा पनि दुई तिहाई पुग्न सक्ने देखिँदैन । अन्य साना दल नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा रहेकाले उनीहरुले यदि सभामुखमाथि महाभियोग दर्ता भयो भने पनि उनीहरुले मतदान गर्ने सम्भावना कम छ ।
कांग्रेस, एमाले र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा मिले भने दुई तिहाई पुग्ने देखिन्छ । तर, यादव नेतृत्वको दलले सभामुखले एमसीसी टेबल गर्ने विश्वासमा रहेको बताएको छ । सभामुखमाथिको महाभियोगको विषय अहिले नै कल्पना गर्न आवश्यक नरहेको सो दलका नेता एवं सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले रातोपाटीलाई बताए ।
जसपा एमसीसी सदनमा पेश गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको र सदनमा पेश गरेपछि त्यसलाई पास वा फेल गर्ने काम सदनको रहेको सांसद राईले बताए । उनले एमसीसी सम्झौतामा कस्ता कस्ता प्रावधान रहेको छ त्यो संसदमा पेश भएपछि स्पष्ट हुने र राष्ट्रविरुद्ध हुने प्रावधान भए सांसदले मतदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने उनले बताए ।अर्कोतिर, सरकार एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन अग्रसर भए पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनका लागि सरकारले हालसम्म कुनै त्यस्तो अभ्यास गरेको छैन । परियोजना के गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म सर्वदलीय बैठक समेत बसेको छैन ।